नेपाललाई आगामी साता स्वास्थ्य सामग्री पठाउँछौं- डब्ल्यूएचओ – List Khabar
Home / अन्तरास्ट्रिय / नेपाललाई आगामी साता स्वास्थ्य सामग्री पठाउँछौं- डब्ल्यूएचओ
admin3weeks ago अन्तरास्ट्रिय Leaveacomment 47 Views
पहिलो डोज लिएपछि संक्रमित भए के गर्ने ? कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएपछि पुनः कोरोनाबाट संक्रमित भएको अवस्थामा पनि दोस्रो डोज खोप लिन सकिन्छ । सामान्य अवस्था भन्दा यो अवस्थामा केही शर्तहरु फरक छन् । भारतीय समाचार पोर्टल न्युज १८ ले उल्लेख गरेअनुसार भारतमा भने यस्तो अवस्थामा दोस्रो डोज लिन कोरोनाको सबै लक्षण देखिन छाडेको २ देखि ४ साता भएको हुनुपर्छ ।
समयमा नै दोस्रो डोज खोप नपाए के हुन्छ ? कोरोना महामारी विश्वभर फैलिएको कारण खोपको माग पनि अत्यधिक छ । यस्तोमा समयमा नै दोस्रो डोज कोरोना खोप नपाउने हो कि भन्ने आशंका अहिले मानिसहरुमा छ ।
कोरोना संक्रमितले खोप लिने कि नलिने ? तपाईं कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित भइसक्नु भएको छ भने तपाइँका लागि कोरोना खोपको लागि धेरै हतार गर्नु नपर्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएपछि हाम्रो शरीरमा बनेको एन्टिबडी कम्तीमा ३ महिनासम्म रहने र यसरी विकास भएको एन्टिबडीले खोपले भन्दा राम्रो सुरक्षा दिने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
पूर्ण डोज खोपको लिएपछि मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? डब्ल्यूएचओकाअनुसार खोपले मानिसलाई कोरोनाको गम्भीर लक्षण देखिन र मृत्युबाट बचाउँछ । खोप लगाएको दुई सातासम्म उल्लेख्य मात्रामा कोरोनाबाट बच्ने सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन ।
Previous यस्ता सामान्य लक्षण देखिना साथ को- रोना परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीको आग्रह, नत्र पछुताउनु पर्नसक्छ !
Next हङकङको सपना देखेर आफैंले श्रीमानको विवाह अर्कैसंग गरिदिइन्, १८ लाख पनि दिइन् अहिले भयो यस्तो बिचल्ली (भिडियो हेर्नुस्)